Aịzaya 59 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Mmehie ndị Izrel na-eme ka ha na Chineke ghara ịdị ná mma (1-8)
Ikwupụta mmehie (9-15a)
Jehova napụtara ndị chegharịrị echegharị (15b-21)
59 Ịzọpụta unu anyịghị Jehova,*+Ọ bụghịkwa onye ntị ike.+ 2 N’eziokwu, ọ bụ ajọ omume unu na-ekewa unu na Chineke unu.+ Ọ bụ mmehie unu mere o ji zooro unu ihu ya. Ọ bụkwa ya mere ka ọ ghara ige unu ntị.+ 3 N’ihi na ọbụ aka unu bụ ọbara ọbara.+ Mkpịsị aka unu bụkwa mmehie mmehie. Unu ji egbugbere ọnụ unu agha ụgha,+ jirikwa ọnụ* unu na-ekwu ihe na-adịghị mma. 4 Ọ dịghị onye na-ekwusi okwu ike ka a na-eme ezi omume.+ Ọ dịghịkwa onye na-ekwu eziokwu n’ụlọikpe. Ha na-atụkwasị obi n’ihe na-enweghị ihe ọ bụ,+ na-ekwukwa ihe na-abaghị uru ọ bụla. Ha atụrụla ime nsogbu, mụọkwa ihe ọjọọ.+ 5 Ha na-abụ àkwá agwọ ọjọọ. Ha na-akpakwa ọnyà ududo.+ Onye ọ bụla nke riri àkwá agwọ ọjọọ ahụ ga-anwụ. Ajụala ga-esikwa n’àkwá ya kụwara akụwa pụta. 6 Ọnyà ududo ha agaghị abụrụ ha uwe. Ha agaghịkwa eji ihe ha mepụtara kpuchie onwe ha.+ Ọrụ ha bụ ọrụ ọjọọ. E jikwa tigbuo zọgbuo mara ha.+ 7 Ha* na-agba ọsọ aga ime ihe ọjọọ. Ha na-emekwa ngwa ngwa ka ha gbuo ndị aka ha dị ọcha.+ Ihe niile ha na-eche bụ echiche ọjọọ. Ha na-emebisị ihe ndị mmadụ ma na-echi ha ọnụ n’ala.+ 8 Ha amaghị otú ha na ndị ọzọ ga-esi na-adị n’udo. Ha anaghị ekpe ikpe ziri ezi.+ Ha na-eme ka okporo ụzọ ha niile gbagọọ agbagọ. Udo agaghị adịrị onye ọ bụla na-eje ije na ha.+ 9 Ọ bụ ya mere ikpe ziri ezi ji dị anya n’ebe anyị nọ,Ezi omume anaghịkwa erute n’ebe anyị nọ. Anyị na-ele anya ìhè, ma, ọchịchịrị ka anyị na-ahụ. Anyị na-ele anya ka ebe niile nwuo gbaa, ma, anyị na-ejegharị n’ọchịchịrị.+ 10 Anyị na-asọgharị ìsì ná mgbidi ka ndị ìsì. Anyị na-asọgharịkwa ìsì ka ndị na-enweghị anya.+ Anyị na-akpọ ụkwụ n’ihe n’etiti ehihie dị ka à ga-asị na chi ejiela. Anyị na-adị ka ndị nwụrụ anwụ ma anyị nọrọ ebe ndị siri ike nọ. 11 Anyị niile na-asụ ude ka anụ ọhịa bea. Anyị na-eru uju, na-ebe ubé ka nduru. Anyị na-ele anya ikpe ziri ezi, ma, ọ bụ n’efu. Anyị na-elekwa anya ka a zọpụta anyị, ma a zọpụtaghị anyị. 12 N’ihi na anyị enupụrụla gị isi ọtụtụ mgbe.+ Mmehie ọ bụla anyị mere na-agba akaebe na ikpe mara anyị.+ Anyị ma ihe anyị mejọrọ. Anyị makwa mmehie anyị nke ọma.+ 13 Anyị emebiela iwu, gọnahụkwa Jehova. Anyị agbakụtala Chineke anyị azụ. Anyị akpaala nkata imegbu ibe anyị na inupụ isi.+ Anyị echeela echiche ịgha ụgha, ghaakwa ya n’obi anyị.+ 14 Anyị ewegala ikpe ziri ezi n’azụ,+Wegakwa ezi omume ebe dị anya.+ Eziokwu* adịghị n’ámá anyị. Ihe dị mma anaghịkwa abatali na ya. 15 Eziokwu* alaala.+ A na-akwakọrọkwa ihe onye ọ bụla na-esoghị na-eme ihe ọjọọ. Jehova hụrụ ihe a, ya ewute ya,*N’ihi na a naghị ekpe ikpe ziri ezi.+ 16 Ọ hụrụ na e nweghị onye na-enyere ha aka. O jukwara ya anya na e nweghị onye na-agbachitere ha. N’ihi ya, o ji aka ya zọpụta ha.* Ezi omume ya nyekwaara ya aka. 17 O yiiri ezi omume ka uwe agha,Kpurukwa okpu agha bụ́ nzọpụta.+ O yiiri uwe ọ ga-eyi emesi ndị iro ya ike,+Jirikwa ịnụ ọkụ n’obi kpuchie onwe ya ka uwe.* 18 Ọ ga-akwụ ndị mmadụ ụgwọ ihe ha mere.+ Ọ ga-ewesa ndị na-emegide ya iwe, kwụọkwa ndị iro ya ụgwọ.+ Ọ ga-akwụ ndị bi n’agwaetiti ụgwọ kwesịịrị ha. 19 Ndị nọ n’ebe ọdịda anyanwụ ga-ebido ịtụ egwu aha Jehova. Ndị nọkwa n’ebe ọwụwa anyanwụ ga-ebido ịtụ ebube ya egwu. N’ihi na Jehova ga-abịa ka osimiri na-asọsi ike,Nke mmụọ ya mere ka ọ na-asọ. 20 Jehova kwuru, sị, “Onye Mgbapụta+ ga-abịa na Zayọn.+ Ọ ga-abịakwute ndị ezinụlọ Jekọb ndị na-anaghịzi emebi iwu.”+ 21 Jehova kwuru, sị, “Ihe a bụ ndụ mụ na ha gbara.+ Mmụọ m nke dị n’ime gị nakwa okwu m nke m tinyere n’ọnụ gị agaghị apụ n’ọnụ gị, n’ọnụ ụmụ* gị, ma ọ bụ n’ọnụ ụmụ ụmụ gị,* malite ugbu a ruo mgbe ebighị ebi.” Ọ bụ Jehova kwuru ihe a.
^ Na Hibru, “Aka Jehova adịghị mkpụmkpụ nke na ọ gaghị azọpụtali unu.”
^ Na Hibru, “ire.”
^ Na Hibru, “Ụkwụ ha.”
^ Ma ọ bụ “Ịkwụwa aka ọtọ.”
^ Na Hibru, “ya adị njọ n’anya ya.”
^ Ma ọ bụ “o ji aka ya merie.”
^ Ma ọ bụ “uwe elu na-enweghị aka.”
^ Na Hibru, “mkpụrụ nke mkpụrụ gị.”